တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကျိုင်းတုံမြို့၊ တပ်မတော်ဆေးရုံ၌ COVID-19 ရောဂါရှာဖွေရေး RT-PCR စက် တပ်ဆင်ထားရှိမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံအတွက် ဆေးအထောက် အကူပစ္စည်းများပေးအပ်လှူဒါန်း၊ NDAA (မိုင်းလား) အဖွဲ့နှင့် UWSA (ဝ) အဖွဲ့တို့မှ တာဝန်ရှိသူများအား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ၊ COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်(ရုပ်သံသတင်း) » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာ့သားကောင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းအိမ်ရာ(လေးထောင့်ကန်)တည်ဆောက်နေမှုအခြေအနေများအား သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်များ စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းမှုကို သွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးပြီး ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သွေးလှူဒါန်း၊ မြန်မာ့သားကောင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းအိမ်ရာ(လေးထောင့်ကန်) တည်ဆောက်နေမှုအခြေအနေများအား သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး (ရုပ်သံသတင်း)
ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်များ စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းမှုကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေး၊ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သွေးလှူဒါန်း
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)မိသားစုများ ဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲကျင်းပ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အားလက်ခံတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနယ်သာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. WouterJurgensအားလက်ခံတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
မေ ၁၀၊ ၂၀၂၀ ဇွန် ၁၊ ၂၀၂၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကျိုင်းတုံမြို့၊ တပ်မတော်ဆေးရုံ၌ COVID-19 ရောဂါရှာဖွေရေး RT-PCR စက် တပ်ဆင်ထားရှိမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံအတွက် ဆေးအထောက် အကူပစ္စည်းများပေးအပ်လှူဒါန်း၊ NDAA (မိုင်းလား) အဖွဲ့နှင့် UWSA (ဝ) အဖွဲ့တို့မှ တာဝန်ရှိသူများအား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ၊ COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်(ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကျိုင်းတုံမြို့၊ တပ်မတော်ဆေးရုံ၌ COVID-19 ရောဂါရှာဖွေရေး RT-PCR စက် တပ်ဆင်ထားရှိမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံအတွက် ဆေးအထောက် အကူပစ္စည်းများပေးအပ်လှူဒါန်း၊ NDAA (မိုင်းလား) အဖွဲ့နှင့် UWSA (ဝ) အဖွဲ့တို့မှ တာဝန်ရှိသူများအား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ၊ COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်
နေပြည်တော်၊ မေ ၁၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ကာကွယ်ရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေး၊ ကုသရေး နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး ဆဌမအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တက်ရောက် (ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H. E. Mr. Chen Hai အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ဩဂုတ် ၁၂၊ ၂၀၂၀ Admin 0
နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ် – ၁၂ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ကျော်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှတပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ညွန့်ဝင်းဆွေနှင့် အဖွဲ့ဝင်များလိုက်ပါလျက် ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်ရှိ
ဩဂုတ် ၇၊ ၂၀၂၀ Admin 0
ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၂၀ Admin 0
ဩဂုတ် 2020 (၄)